March 2020 – Page 18 – Wararka Khaatumo , Somaliland , Puntland Iyo Somalia
DAAWO:-Subxaanalah Sadex Qof oo Soomaali ah ayaa markii ugu horeysay laga helay Cudurka Coronaviruska
March 8, 2020 marqaan 0
Sadex Qof oo Soomaali ah ayaa markii ugu horeysay laga helay Cudurka Coronaviruska Dalka Talyaaniga
DAAWO:-Wasiirka Arrimaha Gudaha Kenya oo ka hadlay Ujeedka uu u yimid Muqdisho
Wasiirka Arrimaha Gudaha iyo Amniga Kenya Fred Matiangi oo Maanta so gaarey Magaalada Muqdisho ayaa faah faahin waxaa uu ka bixiyey ujeedadaka dambeysa Safarka uu ku yimid Magaalada muqdisho ee [Read More]
DAAWO:-Wasiir ka goostay Maamulka Jubbaland, iskuna dhiibay cidanka Soomaaliya Ee Baladxaawo
March 8, 2020 marqaan 2
Saraakiisha Ciidamada Dowladda & Maamulka degmada ay halkaasi kusoo dhaweeyeen Wasiir kuxigeenka Wasaaradda Arrimaha Gudaha Jubbaland oo shalay Gelinkii dambe isku soo dhiibey Ciidamada Dowladda. Wasiir kxuigeenka oo lagu Magacaabo [Read More]
Degdeg:- Wasiirka Amniga Kenya oo kahadlay sababta uu utagay Muqdisho iyo cidda uu la kulmi doono.
Wasiirka Arrimaha Gudaha iyo Amniga Kenya Fred Matiangi oo Maanta so gaarey Magaalada Muqdisho ayaa faah faahin waxaa uu ka bixiyey ujeedadaka dambeysa Safarka uu ku yimid Magaalada muqdisho [Read More]
DAAWO:- MD Deni oo ka hadlay Xuska Maalinta caalamiga ah ee Haweenka Dunida oo maanta lagu xusay Garoowe.
Madaxweynaha Dowladda Puntland Mudane Siciid Cabdullaahi Deni ayaa ka qayb galay munaasabada maalinta Caalamiga ah ee Haweenka Adduunka (International Women’s Day) oo maanta ka qabsoontay magaalada Garoowe. Munaasabadda xuska maalinta [Read More]
Deg-deg:- Wasiir muhiim ah oo tirsan Kenya ayaa gaaray Muqdisho “Ujeedkiisa socodkiisa wax ka ogoow”.
Magaalada Muqdisho waxaa soo gaarey Wasiirka Arrimaha Gudaha iyo Amniga Kenya Fred Matiangi,waxaana Muqdisho kusoo dhaweeyey mas’uuliyin ka tirsan Dowladda Soomaaliya. Wafdiga Wasiirka ayaa waxaa la filayaa inay kulamo la [Read More]
DAAWO:-Xusuuso Khudbadii Cabdiweli Gaas ee sanad kahor “Ma noqon doono madaxwayne kursiga kugula fadhiista” Oraahdaas sax ma noqotay?.
March 8, 2020 marqaan 1
Kadib doorashadii madaxwayne Gaas loga guuleystay waxa uu xafladii caleema saarka ka jeediyay Khudbad dhaxgal noqotay taas oo uu ku ifinayay qaabka uu ula shaqeeyn doono Madaxwaynaha guuleesytay ee Siciid [Read More]
DAAWO:- Puntland oo u diyaar garoowday shirka balaadhan ee dhici doona 15ka bisha.
Madaxweynaha Dowlad goboleedka Puntland Siciid Cabdulalahi Deni ayaa dhawaan waxaa uu iclaamiyey in 15 Bishaan Magaalada Garoowe ee Gobolka Nugaal lagu qabto Shirka Aaya ka tahiga Puntland,kaas oo u diyaar [Read More]
QM oo amaantay doorka Dumarka somaliyeed ay ka qaataan hormarinta dalka.
Wakiilka Xoghahaya guud Qaramada Midoobay ee Arrimaha Soomaaliya James Swan ayaa warqad uu soo saaray waxa uu kaga hadlay maalinta Haweenka adduunka oo maanta ku beegan. Swan ayaa hambalyo u [Read More]
Wasiir kasoo baxsaday Jubbaland oo lagu soo dhaweeyay magaalada Baladxaawo.
Degmada Baladxaawo waxaa gaaray Wasiir ku xigeenka Wasaaradda Amniga Dowlad Goboleedka Jubbaland Cabdiraxmaan Maxamed Xuseen (Cawar) oo gelinkii dambe ee shalay iska dhiibay Degmada Doolow. Wasiir ku xigeenka waxa uu [Read More]
DEG DEG:Cali Khaliif oo banaan cidlo ah taagan & Ku xigeenkiisii oo qaaday wado aan laga filayn “Warsangeli & Dhulbahante oo…..
March 8, 2020 Ali Osman 0
Puntland oo mamnuucday in xeebaheeda ay kusoo xirtaan Doomaha kaluumeysiga “Sababta ogoow”.
Madaxweynaha Dowlad Goboleedka Puntland Siciid Cabdullahi Deni ayaa shir guddoomiyay kulanka Golaha Wasiirada ay ku yeesheen Magaalada Garoowe ee Xarunta Gobolka Nugaal. Kulanka waxaa intiisa badan diiradda lagu saaray arrimaha [Read More]
Xildhibaan kale o la xaqiijiyay in uu ugeeyoyooday Cudurka dilaaga ah ee Coronavirus.
Xildhibaanad katirsan Baarlamaanka cusub ee Jamhuuriyadda Islaamiga ee Iraan laguna magacaabo Fatemeh Rahbar ayaa u geeriyootay Caabuqa Coronavirus oo uu dhacay, sidaas waxaa xaqiijiyay dhaqaatiirka sida gaarka ah kiiskeeda gacanta [Read More]
DFS oo gowr dhaw qoraal kasoo saartay Duqeyn Danab iyo Mareekanka ka fuliyeen Shabeelaha Hoose.
March 7, 2020 marqaan 0
Maanta casardheerki, 7-da Maarso, 2020, Dowladda Federaalka Soomaaliya iyo Ciidanka AFRICOM ee Mareykanka oo iskaashanaya ayaa duqeynka cirka u gaystay xagjiriinta Alshabaab meel u dhaw tuulada Gandarshe ee gobolka Shabeelada [Read More]
Daawo;-Axmed Madoobe “Dowladda & Al-shabaab wax farqi ah uma dhaxeeyo”
Madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Madoobe ayaa ku eedeeyay dowladda dhexe ee Soomaaliya in ay meesha ka saartay hanaanka Sharciga ahaa ee lagu soo dhisay dowladda Soomaaliya. Waxa [Read More]
Madaxweyne Deni oo Qasriga Madaxtooyada ku qaabilay Ex. Madaxweyne Gaas
March 7, 2020 marqaan 5
Madaxweynihii hore ee dowladda Puntland Dr Cabdiweli Maxamed Cali (Gaas), oo mudda 13-bilood ah ka maqnaa Puntland, ayaa maanta oo Sabtiya dib ugu soo laabtay magaalada Garoowe. Garoonka Diyaaradah Garoowe [Read More]
SAWIRO:- Wasaaradda Maaliyadda Puntland oo gilgilashay Ganacsigii soo jireenka ahaa “Magaaladii 3aad oo xiran”.
March 7, 2020 marqaan 1
Ganacsatada Kabarleeyda ah ee Suuqa Bacadlaha Garoowe, ayaa maanta oo Sabtiya shaqa-joojin sameeyay, kadib markii sida ay sheegeen dowladda hoose ee Garoowe ay ku laba-jibbaartay Canshuurta Sannadlaha. Ganacsatada suuqaas, ayaa [Read More]
Turkiga Abaal miyuu ugalay Qaxootiga uu ku fasaxay Giriigga mise isagaa dan kale kalahaa?.
Turkiga ayaana u oggolaan doonin muhaajiriinta inay maraan bada Aegean si ay ugu gudbaan Giriigga, sababo la xiriira inaysan ammaan ahayn, sida ay sheegeen ilaalada xeebaha. Amarkan oo ka soo [Read More]
DAAWO:- Cabdiweli Gaas Waxaa garoowe kusoo dhaweeyay Saaxiibkiisi hore oo kaliya
March 7, 2020 marqaan 3
Gudoomiyaha Golaha Wakiillada Dawladda Punland Mudane, Cabdirashiid Yuusuf Jibril ayaa dalka ku soo dhaweyay Madaxweynihii hore ee Puntland Dr. Cabdiwali Maxamed Cali Gaas oo u yimi inuu ka qeyb galo [Read More]
Wasiir hore xil usoo qabtay oo sheegay in Puntland ay waajib ku tahay taageerida Hogaanka cusub ee Galmudug.
Cali Xaaji Warsame Wasiirkii hore ee Waxbarashada Puntland ayaa ka hadlay Madaxda Ahlusunna ee isku aruursanaayo Magaalada Garowe, islamarkaana Puntland ay soo dhaweysay. Waxaa uu sheegay in haddii ay [Read More]
Jubbaland oo dil ku xukuntay Askari katirsan Ciidanka DFS ee qaybta 43aad.
Maxkamada Ciidanka Jubbaland ayaa xukun dil ah ku riday Dable Bile Khaliif Xussein oo ka tirsan Ciidanka Militariga dowladda Federaalka qaybta 43-aad. Askarigaas ayaa 5-3-2020 askari kale oo ka tirsan [Read More]
Hogaanka Somalida Kenya oo warsaxaafadeed Lix qodob ah kasoo saaray xiisadaha kajira Baladxaawo iyo Mandheera.
Hoggaamiyayaasha Soomaalida Dalka kenya ayaa mar kale ka hadlay xiisadda u dhaxeysa Ciidamada Dowladda Federaalka ah iyo kuwa Jubaland ee ka taagan Magaalada Mandheera. kulanka hoggaamiyayaasha ayaa lagu soo dhaweeyay [Read More]
AKHRISO:- Nuxurka Khudbadii Axmed Madoobe oo lagu weeraray afar dowladood oo taageera DFS.
Madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam ayaa maanta furay kal-fadhiga labaad ee Baarlamaanka Jubbaland. Munaasabada furitaanka Kal-Fadhiga labaad ee Baarlamaanka Jubbaland, waxaa kasoo qaybagalay madaxweyne ku xigeenka labaad Xubno [Read More]
SAWIRO:- Madaxwayne Deni oo qaabilay madaxwaynihii hore ee Puntland.
Madaxweynaha Dowladda Puntland Mudane Siciid Cabdullaahi Deni ayaa maanta Madaxtooyadda ku qaabilay Madaxweynihii hore ee Puntland Mudane Cabdiweli Maxamed Cali Gaas oo maanta dalka dib ugu soo laabtay, kulanka waxaa [Read More]
Degdeg:- Wasiir ka tirsan Jubbaland oo isku dhiibay DFS + Dhabar jab ku dhacay Janan.
Wasiir kuxigeenkii Arimaha Gudaha Garabka Axmed Madoobe Cabdiraxman Cawar”oo iska Xaadiriyay Doolow” Taliska Ciidamadda Xoogga Dalka ayaa kusoo dhaweeyay Degmadda Doolow Waxaana lafilayaa in loo gudbiyo Muqdisho” waa qofka labaad [Read More]